Yini i-autophagy futhi yenzelwe ini? Bezzia
Ukuze uthole incazelo yegama elithi autophagy, kufanele useshe phakathi kwamagama esiGreki, ngoba avela kumagama athi "auto" anencazelo yawo ngokwezwi nezwi ethi "Mina" negama "phagein" ngesiGreki elisho ukudla. Ngakho-ke, incazelo ngqo yegama elithi autophagy, yidla wena. Into engabonakala njenge-macabre noma i-movie ethusayo, kepha inqubo yemvelo yomzimba uqobo.
Amaseli omzimba ahlala eshintsha, efa futhi evuseleleka impilo yonke. Ngoba vimbela umzimba ekugcwaliseni imfucuza nezinye izinto ukuthi akusekho ukusebenza noma ukusebenza emzimbeni, izinqubo zemvelo zenziwa ngamaseli angenamsebenzi aqedwa, ziyavuseleleka. Futhi yilokhu okwenziwa yi-autophagy.
1 Kuyini i-autophagy?
1.1 Ukuzila okuzenzakalelayo nokuzila ukudla ngezikhathi ezithile
I-Autophagy yindlela yemvelo eyenzeka ezingeni lamaselula emzimbeni. Le nqubo iyadingeka ukuze umzimba ukwazi ukususa zonke lezo zinto nezinsalela ezikhiqizwa ngenxa yokuguga kwamaseli angasasebenzi. Njengoba uma kungasuswa, kungavela izifo ezinjenge-Alzheimer's noma iDementia.
Amaseli ngokwawo ayakwazi ukukhetha konke okungasasebenzi ukukuguqula kube amandla namanye ama-molecule ngokusebenza. Kepha lokhu akuyona into eyenzeka kalula, njengoba kubandakanya inqubo ehamba kancane kodwa eqhubekayo. Okusho ukuthi ngesikhathi esithile, amaseli ngokwawo ayakwazi ukuzivuselela ukuze abuyele esimweni esihle kakhulu.
Izifundo zokuzilimaza umzimba zenziwe amashumi eminyaka, njengoba kukholakala ukuthi Ngenxa yale nqubo yokuvuselelwa kwamangqamuzana, izifo eziwohlozayo ezinjengokuwohloka komqondo, iParkinson's noma i-Alzheimer's zingagwenywa. Yize lezi zifundo zingakabi yisinqumo futhi zingaqinisekiswa ngokuqinile. Kepha okubonakalayo yilokho Amaseli adinga ukuhlanzwa ukuze uhlale uphilile futhi ugweme izifo.
Ukuzila okuzenzakalelayo nokuzila ukudla ngezikhathi ezithile
Yize sekuyimfashini eminyakeni yamuva, ukuzila ukudla ngezikhathi ezithile kuyingxenye yezimpilo zabantu abaningi emasikweni ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Hhayi njengendlela yokwehlisa isisindo njengoba isetshenziswa manje, kepha njengendlela yokugcina umzimba uphilile futhi ungenazinto imfucuza edakisa umzimba. Lokhu kungenxa yokuthi ukuze kuvele ukuzilimaza, kufanele kube nokuzila, okusho ukuthi, umzimba uyazidla uma unganikezwa ukudla okukunikeza amandla.
Ukuzila ukudla kusetha i-autophagy isebenze futhi izindlela ezahlukahlukene zingasetshenziswa ukwenza njalo. Okungabizi kakhulu ukushesha okungu-16/8, ngamahora ayi-16 lapho kungadliwa khona ukudla okuqinile kanye namahora ayi-8 lapho kungathathwa khona ukudla. Kukhona nokudla okungenza kusebenze ukuzilimaza komzimba, njengepelepele, ikhofi emnyama, i-turmeric, itiye eliluhlaza, ama-elderberries, noma i-broccoli.
Lezi ngezinye zezinzuzo zokuzisebenzisa:
Se kuqinisa amasosha omzimba.
Kunciphisa amathuba okuhlupheka izifo ezingenayo i-neurodegenerative.
Uhlobo lwesibili sikashukela luyavinjelwa.
Khulisa i amandla.
Kuvikela izimbali amathumbu.
Gwema ukukhuluphala ngokweqile futhi kuyisihluthulelo sokulawula ukukhuluphala.
Izilawuli ukushaya kwegazi.
Kuvikela umdlavuza, ngoba i-autophagy iyanakekela vikela amaseli aphilile.
Ukuzilimaza kuvusa ukukhiqizwa kwe-hormone yokukhula. Okusho ukuthi bathuthukisa ukuminyana kwethambo nobukhulu bemisipha.
Ukuzila okungapheli futhi ngenxa yalokho ukuzilimaza, izindlela ezanele zokuvikela impilo nokugwema izifo ezibangelwa ukuguga kwamaseli omzimba. Noma kunjalo, kubaluleke kakhulu yenza ukuhlolwa okuqhubekayo kwezokwelapha ukuqinisekisa ukuthi wonke amazinga agcinwa elawulwa. Uma ufuna ukuqala ukwenza i-autophagy njengendlela yokuvimbela neyokuvikela impilo, iya kudokotela wakho ukuze uqiniseke ukuthi konke kusebenza kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Yini i-autophagy futhi yenzelwe ini?
I-Craquelure, inqubo elingisa ukuhamba kwesikhathi